သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသော လေဆာဖြတ်တောက်ရောင်းချသူ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လေဆာဖြေရှင်းချက်
အဝတ်အထည်နှင့် အိမ်သုံး အထည်အလိပ်
Mimo Contour Recognition စနစ်
CCD Camera Recognition စနစ်
Sublimation ထုတ်လုပ်မှုကို ရိုးရှင်းအောင်လုပ်ပါ။
Cordura အတွက် R&D
အနံ ၃.၂ မီတာ အတွင်း
Automation အတွက် ဖန်တီးထားသည်။
MimoWork သည် ကြော်ငြာ၊ မော်တော်ယာဥ်နှင့် လေကြောင်း၊ ဖက်ရှင်နှင့် အဝတ်အထည်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ပုံနှိပ်စက်၊ စစ်ထုတ်ထည်စက်မှုလုပ်ငန်း အစရှိသည့် နယ်ပယ်များတွင် သတ္တုမဟုတ်သော ပစ္စည်းလုပ်ဆောင်မှုအတွက် လေဆာဖြေရှင်းချက်များအား ဒီဇိုင်းထုတ်ရာတွင် အထူးပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ လည်ပတ်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် တောင်းဆိုမှုမျိုးကွဲများအတွက် စိတ်ကြိုက်နှင့် အထူးပြုလေဆာဖြတ်တောက်သည့်စက်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။
ဆိုးဆေး sublimation ထုတ်ကုန်များအတွက် အရိုးရှင်းဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်း။
ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ပုံသဏ္ဍာန်များအတွက် တိကျသော ကောက်ကြောင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့် တိကျသော ကွန်တိုဖြတ်တောက်မှု။
ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်းနှင့် ပုံသွင်းဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် မြင့်မားသော အလိုအလျောက်လှုပ်ရှားမှုဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်။
Flexible Materials Cutting ကျွမ်းကျင်သူ။
ပုံပျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆွဲဆန့်ခြင်းမှန်သမျှကို Mimo Contour Recognition System မှ အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပြီး ပုံနှိပ်ထားသောအပိုင်းများကို မှန်ကန်သောအရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်း ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်သည်။
အပြည့်အ၀ အလုံပိတ်ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းသည် ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် လုံခြုံမှုအာမခံချက်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အရည်အချင်းပြည့်မီသောအင်္ဂါရပ်များဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် မှာယူမှုတစ်ခုစီတိုင်းကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။
ကြီးမားသောပုံစံအစိုင်အခဲပစ္စည်းများအတွက် အကောင်းဆုံး entry-level စက်။
Acrylic နှင့် သစ်သား ပြုပြင်ခြင်းအတွက် R&D
ကန့်သတ်မထားဘဲ လွှင့်တင်ခြင်းနှင့် တင်ခြင်းကို ခွင့်ပြုသည်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ပစ္စည်းများဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် ပြိုင်ဘက်ကင်းသော ရွေးချယ်မှု။
လေဆာခေါင်းနှစ်လုံးသည် လွတ်လပ်စွာရွေ့လျားပြီး သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို နှစ်ဆ (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်)။
Nesting Software သည် သင့်ပစ္စည်းများကို အကြီးဆုံးအဆင့်တွင် သိမ်းဆည်းသည်။
အလိုအလျောက် အစာကျွေးခြင်းဖြင့် အဆက်မပြတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း။
အစွမ်းထက်သောလုပ်ဆောင်ချက်သည် အဆုံးမရှိ ဘက်စုံသုံးနိုင်မှုကို ဖန်တီးပေးသည်။
ထိတွေ့မှုမရှိသော မှင်ဂျက်ပရင့်နည်းပညာ (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်)။
Galvo လေဆာကမ္ပည်းထိုးခြင်းနှင့် အမှတ်အသား ၄၀
အပူလွှဲပြောင်းဖလင်ကဲ့သို့ သတ္တုမဟုတ်သော သတ္တုမဟုတ်သော အလုပ်အပိုင်းများကို အမှတ်အသား သို့မဟုတ် အနမ်းဖြတ်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
3D Dynamic Focus သည် ပစ္စည်းကန့်သတ်ချက်များကို ချိုးဖျက်သည်။
တပ်ဆင်မှုလိုင်းတည်ဆောက်ရန် လေဆာအမှတ်အသားပြုလုပ်ရန် (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်)။
သင်၏အချို့သောလိုအပ်ချက်များအကြောင်းကို လေ့လာရန် အကြိုအရောင်းအတိုင်ပင်ခံသည် အရေးကြီးပါသည်။မင်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဟာက အကောင်းဆုံးပဲ။
MimoWork လေဆာစက်များသည် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ အမျိုးမျိုးသော တောင်းဆိုချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
စိတ်ကြိုက်လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက် ထပ်လောင်းနှင့် ဘက်စုံသုံးလေဆာရွေးချယ်စရာများကို ရနိုင်ပါသည်။
MimoWork Service သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည် အမြဲတမ်းထူးခြားသည်ဟုခံစားရစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏လေဆာစက်များ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှုကိုသေချာစေရန်အတွက် အဓိကအခန်းမှပါဝင်ပါသည်။
MimoWork ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ကနဦးပစ္စည်းစမ်းသပ်မှုအဆင့်မှ လေဆာစနစ်စတင်သည့်အချိန်အထိ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အထက်တွင် အမြဲထားရှိသည်။
MimoWork သည် နှစ် 20 အတွင်း တွန်းအားပေးရန် ရည်စူးထားသည်။
လုပ်ငန်းသစ်နှင့်အတူ လေဆာနည်းပညာ၏ ကန့်သတ်ချက်များ
MimoWork ဖြင့် Patch ဖြတ်တောက်ခြင်း။
Laser Cut Patches ဖြင့် ဖက်ရှင်ရှိ သင့်အဝတ်အစားများကို Laser Cut Patch Style ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ ကုတ်အင်္ကျီများ၊ တီရှပ်များ၊ အင်္ကျီများ၊ ဖိနပ်များ၊ ကျောပိုးအိတ်များနှင့် ဖုန်းကာဗာများအပါအဝင် သင်မြင်ရမည့်အရာတိုင်းနီးပါးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။သူတို့...
Laser PCB ထွင်းထုခြင်းဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်းပြီးအောင်လုပ်ပါ။
IC (Integrated Circuit) ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သော Laser PCB Etching PCB သည် အီလက်ထရွန်နစ်အစိတ်အပိုင်းများကြား ဆားကစ်ချိတ်ဆက်မှုသို့ရောက်ရှိရန် လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းများကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကို တစ်ကြိမ်တည်းပြီးအောင်လုပ်ပါ။၎င်းသည် အဘယ်ကြောင့် ပုံနှိပ်ဆားကစ်ကတ် ဖြစ်သနည်း။ကွန်ဒု...
လေဆာကမ္ပည်းထိုး VS လေဆာဖြတ်စက်
လေဆာ ကမ္ပည်းထိုးခြင်း သည် လေဆာဖြတ်စက် နှင့် ကွဲပြား ခြားနား စေ သည် ။ ဖြတ် တောက် ခြင်း နှင့် ထွင်း ထု ခြင်း အတွက် လေဆာ စက် ကို ဘယ်လို ရွေးချယ်ရ မလဲ ? သင့် မှာ ဒီလို မေး မြန်း စရာ တွေ ရှိရင် လေဆာ မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ ဖို့ စဉ်းစား နေ ပါတယ် ။
ဆောင်းရာသီတွင် CO2 လေဆာစနစ်အတွက် အေးခဲ-ဒဏ်ခံခြင်းအစီအမံများ
အနှစ်ချုပ်- ဤဆောင်းပါးသည် အဓိကအားဖြင့် လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏ ဆောင်းရာသီတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အခြေခံမူများနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းများ၊ လေဆာဖြတ်တောက်သည့်စက်၏ အေးခဲမှုကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နှင့် လိုအပ်သည့်ကိစ္စရပ်များကို အဓိကရှင်းပြထားသည်။
MimoWork ဖြင့် လေဆာနည်းပညာကို ရှာဖွေပါ။
ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာကို စာရင်းသွင်းပါ။
No.840 Chengliu Hwy၊ Jiading ခရိုင်၊ ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ်
©မူပိုင်ခွင့် - 2010-2021 : All Rights Reserved. , , , , , , ,